Banyere Ding Tai
Yancheng Ding Tai Machinery Co., Ltd bụ nyocha na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa, ntinye, ọrụ na ahia n'otu ụlọ ọrụ dị iche iche.
Anyị nwere igwe na-ehulata CNC, igwe na-egbutu CNC, igwe na-ahụ maka igwe, igwe na-egwupụta ihe, igwe lathe, igwe na-egwe ọka, ngwa nnwale peening / ogbugba ogbunigwe, ụlọ nyocha gbara agba / gbaa ọkụ, ngwa nhazi dị elu na ngwa ihe.
Isi ngwaahịa anyị:
1. Igwe na-agbawa agbawa / ngwa mgbawa:
(1) Spinner hanger gbara agba agba igwe / nko ogbugba ogbugba igwe
(2) Igwe na-ebufe ihe na-agba agba
(3) igwe na-agbawa agbawa
(4) Waya ntupu belst gbara agbawa igwe
(5) Nkwusioru nke catenary na-agafe igwe agba agba agba
(6) Mee ka igwe na-agba agba agba agba
2. Igwe peening gbara agba
3. Igwe na-agba agba aja
4. Ụlọ ịgbawa ájá na akụkụ wdg.
1. N'elu ihicha ebe: nkedo, forging, okpomọkụ ọgwụgwọ, tupu ulo oru ígwè ngwá mkpuchi elu ihicha.
2. N'elu ihu ike / ike ebe: Mbupu, ohere ụgbọ elu na ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè, àkwà mmiri ụlọ ọrụ, mmiri ụlọ ọrụ, thermal ike ọgbọ, ifufe ike ọgbọ, Mmanụ awara awara, ụgbọ ala ụlọ ọrụ elu ike nhazi.
3. Mpaghara dedusting ụlọ ọrụ wdg.
Yancheng Dingtai Machinery Co., Ltd bụ ọkachamara ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na imewe na imepụta ngwá ọrụ mkpuchi sandblasting, ngwa ịgbawa agbawa na ngwa nhazi ájá.
Ụlọ ọrụ ahụ nwere nke ọma ma nwee ike ọrụ nkà na ụzụ siri ike.Ọ nwere ọtụtụ afọ nke imewe na n'ichepụta ahụmahụ.A na-ere ngwaahịa ya nke ọma na mpaghara na obodo iri abụọ n'ofe mba ahụ.A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe na ike ikuku, ụgbọ elu, metallurgy, igwe, ihe owuwu, ịrụ ụgbọ mmiri, nkedo, Ngwuputa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.Àgwà ọma, aha ọma na zuru okè mgbe-sales ọrụ emeriela otu nnabata si users.Our isi ngwaahịa bụ: nnukwu na ọkara-sized sandblasting na eserese ụlọ;nnukwu na ọkara-sized site-ụdị efere na profaịlụ pretreatment ahịrị;
Isi ihe anyị na-emepụta bụ: nnukwu na ọkara-sized sandblasting na eserese ụlọ;nnukwu na ọkara-sized site-ụdị efere na profaịlụ pretreatment ahịrị;nnukwu na ọkara-sized structural akụkụ mkpuchi pretreatment ahịrị;nko ụdị, catenary ụdị, rotary table, trolley ụdị , Crawler-ụdị ogbugba ogbugba igwe nke dị iche iche usoro;akụrụngwa na-ewepụ uzuzu nchedo gburugburu ebe obibi;akụrụngwa nhazi ájá;Alloy wear-eguzogide ọgwụ nkedo ígwè, ihe nkedo ígwè ngwa na ígwè shots nke dị iche iche ihe, wdg, na nwekwara ike chepụta na imepụta a dịgasị iche iche nke na-abụghị ngwaahịa dị ka onye ọrụ chọrọ Standard ihicha akụrụngwa.
Dabere na tenet nke "ịlanarị site n'ịdị mma na mmepe site na sayensị na nkà na ụzụ", ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya n'ezie na ha na ndị enyi nọ n'ụlọ na ná mba ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ.A na-anabata ndị enyi si n'akụkụ niile nke ndụ ileta na kparịta ụka.Anyị na-atụsi anya ike ka anyị na gị rụọ ọrụ iji mepụta ihie.
Ụlọ ọrụ ahụ nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ iri nke mmepụta ígwè ọrụ.Ngụkọta akụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ yuan nde 28, nke akụ edobere bụ nde yuan 12.Isi ụlọ ọrụ na-ekpuchi mpaghara 12,000 square mita, gụnyere ihe owuwu nke 7,600 square mita.Ndị ọrụ ụlọ ọrụ dị ugbu a karịa 100, gụnyere ihe karịrị 10 ndị ọkachamara n'etiti na ndị agadi, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ahụ enwetala ọzụzụ nka nka ọkachamara, nwere ọkwa mmụta dị elu na ahụmịhe bara ụba nke bara uru, nwere nhazi ngwaahịa dị elu nke ọkwa mbụ yana ndị ọrụ njikwa mma. , ma nwee usoro nhazi na mmepụta ihe ọgbara ọhụrụ ma nye ọrụ zuru oke nke ọrụ ahịa mgbe ọ gasịrị.Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emeziwanye nhazi ahụ mgbe niile ma na-agbaso usoro nkà na ụzụ tozuru okè ma dị irè iji nweta ihe mgbaru ọsọ mmepụta.
N'ime afọ iri gara aga, mgbe n'ihu mmezi na ịba ụba, njikwa, ngwaahịa àgwà, mgbe-sales ọrụ na iwebata talent e ukwuu mma, n'ihi ya, ọ nwere ike ibido ọhụrụ ngwaahịa mmepe na dị iche iche metal elu ihicha akụrụngwa na foundry ogbako na ígwè Ọdịdị. workshops.Engineering oru ngo si imewe, n'ichepụta na ntinye na ọrụ.
1. zaghachi ajụjụ gị n'oge.
2. Ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile n'oge.
3. Nhazi ahaziri dị.
4. Enwere ike inye ndị ahịa anyị ihe ngwọta pụrụ iche na nke pụrụ iche site n'aka ndị injinia na ndị ọrụ anyị zụrụ nke ọma na ndị ọkachamara.
5. A na-enye ndị na-ekesa anyị ego ego na nchebe pụrụ iche.
6. Ụlọ ọrụ ọkachamara: Anyị bụ ndị na-emepụta ihe, ndị ọkachamara na-emepụta ụdị ọ bụla nke Shot Blasting Machine & Molding Machine & Core Shooting Machine maka ihe karịrị afọ 40, na-asọmpi na ezigbo mma.
7. Dị ka onye na-ere ihe n'eziokwu, anyị na-eji ihe dị elu dị elu, igwe dị elu, ndị ọkachamara na-ahụ maka nkà na ụzụ iji hụ na ngwaahịa anyị ga-agwụcha na njirimara dị elu ma kwụsie ike.
abrator, Igwe na-agba ọkụ roba Belt, Site na igwe na-agbawa nri ọkụ, Nko abụọ Abrator, Hook Polisher Abrator, Igwe na-agbapụta eriri roba ụdị agba, Ngwaahịa niile